Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Dib-u-qaabaynta Dalxiiska Mustaqbalka iyo Adduunka: Hawl-hawleed cusub oo UNWTO ah oo Sucuudiga ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • LGBTQ • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Xoghayaha Guud ee UNWTO ayaa isku dayay inuu joojiyo maanta, laakiin Golaha Guud ee UNWTO ayaa sameeyay go'aan muhiim ah markii la dhisayay guddi hawleed madax-bannaan oo dib u habeyn ku sameeya Dalxiiska mustaqbalka.
Maanta, Golaha Guud ee UNWTO wuxuu lahaa laba geesiyaal:
HE Axmed Al Khateeb, Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya
Reyes Maroto, Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Spain
Shalay, Golaha Guud ee UNWTO wuxuu lahaa hal geesi - Mudane. Gustav Segura Costa Sancho Wasiirka Dalxiiska ee Costa Rica.
Shalay waxa ay guul u ahayd dimuqraadiyadda Golaha Guud ee UNWTO markii doorasho qarsoodi ah, wufuud ka kala socotay in ka badan 80 waddan ay xaqiijiyeen Zurab Pololikashvili inuu noqdo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay 4 sano oo kale.
Maanta waxay u ahayd guul ka sii weyn dimuqraadiyadda markii ay ka soo horjeedaan rabitaanka Xoghayaha Guud, mustaqbalka Dalxiiska Adduunka iyo UNWTO waxaa la geliyey gacanta Guddi Hawleed cusub - hindise ay keeneen Sacuudi Carabiya iyo Spain.
Tilmaamaha ugu horreeya ee waxa ku jira dhuumaha ayaa lagaga hadlay Xarunta UNWTO ee Afrika ee Cabo Verde Sebtembar 2, 2021.
Sida shalay oo kale, dimuqraadiyadda ayaa mar kale guulaysatay maanta
Shirweynaha guud ee UNWTO ee ka socda magaalada Madrid, ayaa maanta lagu ansixiyey soo jeedinta dib-u-qaabaynta Dalxiiska mustaqbalka, kaas oo ay soo gudbiyeen Boqortooyooyinka Sucuudiga iyo Spain.
Hogaamiyaasha Dalxiiska ayaa sheegay eTurboNews"Tani waxay wax ka beddeshaa qaybta dalxiiska caalamiga ah."
Xoghayaha Guud ayaa si adag uga soo horjeestay soo jeedintan, maadaama ay dhigayso mustaqbalka hawlaha dib-u-habaynta socdaalka iyo dalxiiska ee ka baxsan miiskiisa oo loo gacangeliyo Golaha Guud iyo Golaha Fulinta, oo hoos yimaada hoggaanka Sacuudi Carabiya iyo Isbaanishka.
Zurab Pololikashvili u maleeyay in qorshayaashiisa ay ku filan yihiin inuu dib u qaabeeyo mustaqbalka dalxiiska wuxuuna ku booriyay Golaha loo dhan yahay inaysan u codeyn soo jeedinta Sacuudiga iyo Isbaanishka. Ma uusan doonaynin Guddi hawleed madax-bannaan oo gaar ah oo ku saabsan dib-u-qaabaynta Dalxiiska.
Xoghayaha Dalxiiska, Mudane Najib Balala oo u dhashay Kenya, ahna Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga Mudane Axmed Al Khateeb, iyo Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica Mudane Edmund Bartlett ayaa dhamaantood dhoola cadeynayay sawirkan maanta la qaaday kadib codeynta.
La ogolaaday: Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Kooxda Hawsha Mustaqbalka
Wufuudda UNWTO waxay isku raaceen, tani waxay ahayd guul weyn oo u soo hoyatay Dalxiiska Adduunka.
Faafida COVID-19 waxay muujisay, si aan horay loo arag, doorka muhiimka ah ee dhaqaale iyo bulsho ee dalxiisku ka ciyaaro adduunka oo dhan. Dalxiiska waa darawalka ugu weyn ee dhaqaalaha adduunka, laakiin masiibada ayaa saameyn xun ku yeelatay caalamka oo dhan waxayna si weyn u saameysay qeybtan muhiimka ah, taasoo yareysay qiimaha dhaqan-dhaqaale ee ay abuurto. 62 milyan oo shaqo iyo US$ 4 tiriliyan GDP ayaa luntay 2020. Adduunku wuxuu u baahan yahay inuu qaado tallaabo si looga fogaado in tani mar kale dhacdo iyo in dib loo xoojiyo qaybtan muhiimka ah.
Si ay waaxdu u soo kabsato, u barato, oo ay u noqoto mid u adkaysata shooga adduunka mustaqbalka, waxay u baahan tahay isbeddel, ballanqaad, iyo maalgashi si ay uga faa'iidaystaan ​​dadka adduunka oo dhan, gaar ahaan waddamada soo koraya. Si dib loogu habeeyo waaxda dalxiiska si muuqata oo heer caalami ah, waxaan u baahanahay iskaashi caalami ah oo weyn iyo awood la siiyo ururada caalamiga ah. Tani waxay xaqiijinaysaa hab isku dhafan oo la isku dubariday oo soo dhawaynaya dalxiiska ee isku xidhan iyo dabeecadda isku xidhan iyo
waxay kordhisaa ka qayb qaadashada waaxdu gaarista Himilooyinka Horumarka Joogtada ah ee Qaramada Midoobay. Hadda waa waqtigii dib loogu habeyn lahaa Dalxiiska mustaqbalka iyadoo loo marayo isbeddel, ballanqaad, iyo maalgashi.
Hogaamiye firfircoon oo dalxiiska oo doonaya inuu si caalami ah ula shaqeeyo dawladaha kale ee danaynaya iyo hay'adaha gaarka ah, Sacuudi Carabiya waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay in ay wadashaqayn heer kasta ah sameeyaan ballanqaad kaas oo udub dhexaad u ah War-murtiyeedka Diriyah ee la saxiixay intii lagu jiray Madaxtinimada Sucuudiga ee G20 ee 2020 , kaas oo aqoonsan doorka muhiimka ah ee iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka ah ay ka ciyaaraan waaxda dalxiiska.
Ma aha oo kaliya in Sacuudi Carabiya ay ka go'an tahay, sidoo kale waxay diyaar u tahay inay bixiso kheyraadka lagama maarmaanka ah si loo xoojiyo qaybta oo ku salaysan mabaadi'da joogtaynta iyo fursadaha dhammaan, la shaqeynta iyo iyada oo loo marayo hay'adaha caalamiga ah. Maaddaama uu yahay maalgeliyaha ugu weyn adduunka ee dalxiiska, Sacuudi Carabiya ayaa ballan qaaday USD 100 milyan si ay u dhaqaajiso Hindisaha Bulshada Dalxiiska iyada oo loo marayo Bankiga Adduunka, si ay u noqoto soo kabashada waaxda soo kabashada, iyada oo awood u siinaysa bulshooyinka iyada oo loo marayo barnaamijyada kobcinta awoodda aadanaha iyo hay'adaha si ay u faafiyaan faa'iidooyinka dhaqaale ee dalxiiska.
Sacuudi Carabiya waxa ay saaxiib firfircoon la ahayd UNWTO, iyadoo taageerta dadaallada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin UNWTO Academy iyo UNWTO ee barnaamijka tuulooyinka ugu fiican iyo sidoo kale inay hoy u tahay Xafiiska Gobolka ee UNWTO, oo la furay May 2021.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay u soo bandhigtay UNWTO iyo xubnaheeda soo jeedin ah in dib-u-qaabaynta dalxiiska mustaqbalka si wadajir ah, oo ay ku jirto in la sameeyo dib-u-qaabaynta dalxiiska ee mustaqbalka. Soo jeedintan ayaa ujeedadeedu tahay in la mideeyo qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, awood siinta ururada dhinacyo badan leh, iyo kordhinta iskaashiga ka dhexeeya daneeyayaasha si loo ilaaliyo caqabadaha mustaqbalka. Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Kooxda Hawsha Mustaqbalka waxa kale oo ay hiigsanaysaa in ay dib u xoojiso UNWTO iyada oo la isku raacsan yahay,
iyadoo la tixgelinayo isbeddellada lagu sameeyo hababka shaqada ee hadda UNWTO, iyo/ama dib-u-habaynta kale ee UNWTO.
Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Kooxda Hawsha Mustaqbalka
Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-hawleedka Mustaqbalka waxa ay ka koobnaan doontaa hal Dawlad Goboleed oo ay soo xulaan mid kasta oo ka mid ah Guddiyada Gobolka iyo kursi. Iyada oo la kaashanayo Sucuudiga sida ay uga go'an tahay horumarinta waaxda, iyo soo jeedinteeda dib u habaynta Dalxiiska mustaqbalka, Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa nafteeda ku bixinaysa in ay guddoomiye u noqoto Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka.
Qaraarka Spain iyo Sacuudiga.
Golaha Guud: Qaraarka la ansixiyay Diseembar 2, 2021
Isagoo xusay in Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya Mudane Axmed Al Khateeb uu ku wargeliyay Xoghayaha Guud ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya soo jeedinta dib-u-qaabaynta Dalxiiska mustaqbalka iyo in soo jeedintan ay ka mid tahay in dib-u-habayn lagu sameeyo Dalxiiska Boqortooyada Sucuudi Carabiya. Kooxda Hawsha Mustaqbalka,
Markaan eegay xogta uu soo gudbiyay Xoghayaha Guud ee ku saabsan soo jeedinta.
Iyadoo la tixraacayo in dunidu ay u baahan tahay waxqabad maadaama muhiimadda dalxiiska ay xoojisay faafitaanka COVID-19 iyo in weli laga dareemayo saameynta xun ee masiibada, gaar ahaan waddammada soo koraya, kuwaas oo Xeerarka UNWTO ay si gaar ah u tixraacayaan.
Iyadoo la xasuusan yahay in saamaynta dhaqan-dhaqaale ee dalxiisku ay ahayd mid ballaadhan oo la taaban karo. iyo in iskaashiga dhinacyada badan leh ay lama huraan u tahay xoojinta qaybta.
Iyadoo la tixraacayo qodobka 12(j) ee xeer hoosaadka UNWTO, Golaha loo dhan yahay wuxuu dhisi karaa hay'ad kasta oo farsamo ama goboleed oo lagama maarmaan noqon karta.
Waxay aqoonsanaysaa muhiimadda istiraatijiyadeed ee ay leedahay in dhammaan xubnaha UNWTO lagala shaqeeyo furaha
Hindisaha dib-u-qaabaynta Dalxiiska mustaqbalka iyadoo diiradda la saarayo isbeddelka, ballanqaadka,
Wuxuu aqoonsanayaa muhiimada ay leedahay ka go'aan qaadashada dib-u-qaabaynta Dalxiiska mustaqbalka
Waxaa la xusuustaa in Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay hadda martigeliso Xafiiska Gobolka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya
UNWTO oo ku sugan magaalada Riyaad ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya;
Wuxuu go'aamiyay in la dhiso guddi-hawleed ka tirsan UNWTO oo loogu magac daray Dib-u-qaabaynta
Dalxiiska ee Kooxda Hawsha Mustaqbalka;
Wuxuu go'aamiyaa inuu amar ku bixiyo Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka ee gudaha
iyadoo la raacayo soo jeedintan Boqortooyada Sacuudiga;
Wuxuu go'aansadaa in waajibaadka Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka uu doono
sii wad ilaa kalfadhiga 26aad ee Golaha Guud oo si toos ah u cusboonaysiin doona haddii aan si kale loo go'aansanin aqlabiyadda Dawladaha xubinta ka ah buuxa ee jooga iyo codaynta;
Wuxuu go'aansaday in Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-hawleedka Mustaqbalka uu ka koobnaan doono
hal Dawlad-goboleed oo ay soo xulaan mid kasta oo ka mid ah Guddiyada Gobollada oo lagu daray guddoomiye. lf a
Komishanka Gobolku ma aqoonsan Xubin Hawleedkooda dhammaadka rubuci hore ee 2022, ka dibna shirgudoonku waa inuu martiqaadaa Dawlad-goboleedka xubinta ka ah gobolkaas.
Guddiga ka mid noqoshada guddiga shaqada;
Wuxuu Boqortooyada Sacuudi Carabiya u magacaabay guddoomiyaha dib u habeynta dalxiiska ee
Kooxda Hawsha Mustaqbalka;
Waxay u fasaxdaa Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka inay qaataan xeerar u gaar ah
habraaca hadba sida loogu baahdo;
Waxay ku boorinaysaa Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka inay hawshooda u bilaabaan
sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah oo aan ka dambayn dhamaadka rubuci hore ee 2022;
Wuxuu ku martiqaadaa Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka si ay u soo gudbiyaan warbixinnada iyo
talooyinka ku socda Golaha Fulinta iyo Golaha Guud,
iyadoo laga yaabo inay u aragto inay habboon tahay.
l. Soo jeedinta dib u habeynta Dalxiiska mustaqbalka
Warqad ku taariikheysneyd 25 October 2021, Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Mudane Axmed Al Khateeb, ayaa ku wargeliyay Xoghayaha Guud soo jeedinta Boqortooyada Sacuudi Carabiya in ay kala shaqeyso saaxiibada caalamiga ah dib u habeynta dalxiiska. in la mideeyo qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, la xoojiyo hay'adaha caalamiga ah lana kordhiyo iskaashiga ka dhexeeya daneeyayaasha si looga ilaaliyo caqabadaha mustaqbalka iyada oo loo marayo tallaabooyin kala duwan, oo ay ku jiraan samaynta gudaha UNWTO guddi hawleed si ay dib ugu habeeyaan dalxiiska mustaqbalka ("Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawsha Mustaqbalka Xoog”).
Nuqul ka mid ah warqadda ayaa ku lifaaqan dukumeentiga hadda sida Lifaaqa l.
Codsiga Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Xoghayaha Guud wuxuu halkan ku soo gudbinayaa soo jeedintan dib-u-qaabaynta Dalxiiska mustaqbalka oo ay ku jirto in la sameeyo dib-u-qaabaynta dalxiiska mustaqbalka mustaqbalka, go'aanna ka gaadho Golaha Guud ee UNWTO, si waafaqsan Xeerarka 38 (1) iyo 40 ee Xeer-hoosaadka Golaha Guud.
II. Baahida Waxqabad
Dalxiiska waa darawalka ugu weyn ee dhaqaalaha adduunka, laakiin masiibada COVID-19 ayaa saameyn xun ku yeelatay adduunka oo dhan, waxayna si weyn u saameysay qaybtan muhiimka ah, taasoo hoos u dhigtay qiimaha dhaqan-dhaqaale ee ay abuurto. 62 milyan oo shaqo, iyo USD 4 tiriliyan GDP sanadlaha ah ayaa luntay 2020. Dhammaan wadamada ayaa dhibtooday. Laakin saameyntani waxay si aan loo eegeyn ugu dhacday dunida soo koreysa.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay aqoonsan tahay in siyaasadda caalamiga ah ee hadda jirta aysan ka tarjumayn muhiimadda fog ee qaybta dalxiiska oo la joogo waqtigii ay tani isbeddeli lahayd. Dalxiiska ayaa hormuud u ah dhaqaalaha caalamka. Kahor inta uusan faafin masiibada, 10.4% GDP-ga caalamiga ah waxaa ka dhashay safar iyo dalxiis iyo 1 ka mid ah 4 shaqooyin cusub waxaa abuuray waaxda dalxiiska.
Faafida ayaa saameyn xun ku yeelatay caalamka oo dhan waxayna si weyn u saameysay qaybtan muhiimka ah, taasoo hoos u dhigtay qiimaha dhaqan-dhaqaale ee ay abuurto.
Si ay waaxdu u soo kabsato, u barato oo ay u noqoto mid u adkaysata shooga adduunka mustaqbalka, waxay u baahan tahay isbeddel, ballanqaad iyo maalgashi si ay uga faa'iidaystaan ​​dadka adduunka oo dhan, gaar ahaan waddamada soo koraya. Si dib loogu habeeyo waaxda dalxiiska si muuqata oo heer caalami ah, waxaan u baahanahay iskaashi caalami ah oo weyn iyo awood la siiyo ururada caalamiga ah.
Tani waxay xaqiijin doontaa hab isku dhafan oo isku xidhan oo soo dhawaynaya dalxiiska ee isku xidhan iyo dabeecadda isku xidhan oo kor u qaadaysa ka qayb qaadashada waaxdu ee Qaramada Midoobay Himilooyinka Horumarinta Joogtada ah.
III. Waajibaadka Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka
Si wax looga qabto arrimaha kor ku xusan, Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay soo jeedinaysaa in UNWTO ay sameyso dib-u-qaabaynta dalxiiska ee mustaqbalka.
Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka waxa loo xilsaarayaa:
i. Dib u xoojiso UNWTO iyadoo la tixgelinayo isbeddellada UNWTO's
hababka shaqada ee hadda, iyo sidoo kale samaynta barnaamijyo la hagaajiyay iyo
dadaallada, si loo hubiyo in UNWTO ay u adeegi karto baahiyaha jira iyo kuwa mustaqbalka
waaxda dalxiiska, gaar ahaan marka la eego dunida soo koraysa;
ii. in la qaado tillaabooyin ka jawaabaya baaqyada caalamiga ah ee UNWTO taas
waxay siisaa Dawladaha xubinta ka ah barnaamijyo iyo hindisayaal la hagaajiyay, taas
waxay awood u leedahay inay fuliso natiijooyin la taaban karo oo la qiyaasi karo kuwaas oo ah
loogu talagalay in loogu adeego mustaqbalka, kaas oo daboolaya baahiyaha dhammaan Dawladaha Xubnaha ka ah
oo ay ku jiraan Dawladaha soo koraya iyo kuwa la socda saddexda tiir ee muhiimka ah ee Dib-u-qaabaynta
Dalxiiska mustaqbalka: waaritaanka, adkeysiga iyo ka-qaybgalka; iyo
iii. dhiirigeli oo xaqiiji ka qaybgalka macnaha leh ee daneeyayaasha aan Dawliga ahayn
dib u habeynta waaxda dalxiiska caalamiga ah.
Waajibaadkan Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka waxa uu la jaan qaadayaa ujeeddooyinka iyo ujeedooyinka UNWTO.
Si loo hubiyo in Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-hawleedka Mustaqbalka ay qancin karaan
Waajibaadka, wuxuu socon doonaa ilaa ugu yaraan 26-aad (cadiga) kalfadhiga Golaha Guud ee UNWTO. Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka waa in si toos ah loo cusboonaysiiyaa, haddii aanay si kale go'aan uga gaadhin inta badan Waddamada Xubinta ka ah ee jooga iyo codaynta.
IV. Sacuudi Carabiya: Ku baaqay in dib loo qaabeeyo mustaqbalka Dalxiiska si wadajir ah
Hogaamiye fir fircoon oo dalxiiska ah, Sucuudigu waxa uu muujiyaa sida ay uga go'an tahay in wadashaqayn heer kasta ah la sameeyo go'aan ku yaala xudunta War Murtiyeedka Diriyah ee la saxeexay intii lagu jiray Madaxtinimada Sucuudiga ee G20 sanadka 2020, kaas oo aqoonsan doorka muhiimka ah ee iskaashiga guud iyo kuwa gaarka ah ay ka ciyaaraan waaxda dalxiiska.
Sacuudi Carabiya waxa ay la-hawlgal firfircoon la ahayd UNWTO, iyada oo taageerta dadaallada muhiimka ah oo ay ku jiraan UNWTO Academy iyo UNWTO ee Barnaamijka Tuulooyinka ugu Fiican iyo sidoo kale in ay noqoto guriga Xafiiska Gobolka ee UNWTO oo la furay May 2021.
Maaddaama uu yahay maal-geliyaha ugu weyn adduunka ee dalxiiska, Sacuudi Carabiya ayaa ballan qaaday USD 100 milyan si ay u dhaqaajiso Hindisaha Bulshada Dalxiiska iyada oo loo marayo Bangiga Adduunka si ay u noqoto soo-kabashada waaxda soo kabashada iyada oo awood u siinaysa bulshooyinka iyada oo loo marayo barnaamijyada kobcinta awoodda aadanaha iyo hay'adaha si ay u faafiyaan faa'iidooyinka dhaqaale ee dalxiiska.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku guuleysatay inay qabato door hoggaamineed gudaha UNWTO.
Marka laga soo tago martigelinta Xafiis Goboleedka UNWTO, Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay si wada jir ah u martigelisay Shirka Guddiga Xasaradaha Dalxiiska Adduunka ee UNWTO, iyo sidoo kale shirkii 47aad ee Guddiga Gobolka ee UNWTO ee Bariga Dhexe. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale ka soo shaqeysay dhowr guddi iyo hay'ado ka tirsan UNWTO, oo ay ku jirto hadda guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Fulinta.
Iyada oo qayb ka ah sida ay uga go’an tahay dib u habaynta Dalxiiska mustaqbalka, Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa soo bandhigtay in ay guddoomiye u noqoto Dib-u-qaabaynta Dalxiiska ee Hawl-galka Mustaqbalka.
dib u dhiska safarka UNWTO
saadd rehman wuxuu leeyahay,
Diisambar 6, 2021 at 11:17
Maqaal aad u fiican oo si fiican loo qoray, faa'iido badan iyo faa'iido badan. Sii wad soo dhejinta qoraalka qiimaha leh ee sidan oo kale ah!